Muxuu ka dhignaa goolkii uu xalay Mason Greenwood u dhaliyey Kooxdiisa Manchester United kulankii Sheffield? – Gool FM
(Manchester) 25 Nof 2019. Mason Greenwood ayaa xalay gool u dhaliyey kooxdiisa Manchester United kulankii ay barbaraha 3-3 la geleen naadiga Sheffield United ee horyaalka Premier League.
Waxa uu ahaa goolkiisii ugu horreeyey ee uu ka dhaliyo horyaalka Premier League, isagoo sidoo kale goolkaasi ka dhigay Greenwood da’yarkii ugu horreeyey ee xilli ciyaareedkan gool dhaliya horyaalka iyo da’yarkii saddexaad ee Man United gool u dhaliya horyaalka Premier League.
Mason Greenwood ayaa noqday da’yarkii saddexaad ee Man United gool u dhaliya horyaalka Premier League, isagoo haatan jira 18-sanadood kaliya ayuu sidoo kale xalay noqday da’yarkii ugu horreeyey ee gool ka dhaliya horyaalka Premier League kal ciyaareedkan.
Haddaba sawirka hoose dushiisa ka eeg xiddigaha ugu da’da yar ee gool ka dhaliyey xilli ciyaareedka horyaalka Premier League:-
Isagoo jira 18-sanadood iyo 54 maalmood, Mason Greenwood ayaa noqday da’yarkii saddexaad ee Premier League gool u dhaliya Manchester United kaddib Danny Welbeck oo isagoo jira 17-sanadood iyo 355 maalmood gool u dhaliyey horyaalka Man Utd iyo Federico Macheda isaguna gool u dhaliyey horyaalka Man U isagoo jira 17 sanadood iyo 226 maalmood.
Waxaa xalay loo aqoonsaday Mason Greenwood xiddigii saddexaad ee ugu da’da yaraa oo gool u dhaliya Manchester United abid tartankan horyaalka Premier League.
Xiddiga bartilmaameedka u ah Arsenal ee Samuel Umtiti oo shaaciyey Kooxdiisa xigta ee uu ku biiri doono